Dhululubada, Haydarooliga ugu fiican, Dahaarka Biriiga - Wei Run
Waxaa la aasaasay 1998, Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. Waxay ku taal aagga horumarinta dhaqaalaha ee Liaocheng, Gobolka Shandong, waxay ku fadhidaa aag dhan 68956 mitir murabac iyo goob dhisme oo dhan 39860 mitir murabac ah. Waxaa jira 327 shaqaale, oo ay ku jiraan in ka badan 52 shaqaale xirfad iyo farsamo leh. Wadarta hantida waa 83 milyan oo yuan dakhliga iibka sanadlaha ahna waa 200 milyan oo doolar. Dhululubo saafi ah ayaa inta badan loo adeegsadaa rarka, isteerinka isteerinka, barxada qaadista, gawaarida qashinka, gawaarida qashinka, gawaarida xamuulka qaada, iyo mashiinada dhismaha oo badan. Ka dhigi kara sida shuruudahaaga iyo sawiradaada Aqbal OEM iyo ODM.
Waxa Loo Adeegsaday Silsiladda Hydraulic
Dhululubada Haydarooliga guud ahaan waxaa loola jeedaa dhululubo haydarooliga ah. Mashiinka Haydarooliga waa nooc ka mid ah dareeraha hawo-hayaha kaas oo u beddelaya tamarta hidda-haweedka tamar farsamo wuxuuna sameynayaa dhaqdhaqaaq isku dhafan oo toosan (ama dhaqdhaqaaq lulid). Way ku fududahay qaab dhismeedka waana lagu kalsoonaan karaa hawlgalka. Goorma ...
Dhululubo Haydarooliga, dhab ahaan, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qalabka farsamada. Waa inay buuxisaa shuruudaha riixitaanka, istaroogga, booska rakibida iyo cabirka rakibida qalabka oo dhan. Qaab dhismeedka is haysta ee gaarka ah ee mashiinada dhismaha, xadka dhululubadu waa mid aad u adag. Kadib d ...
Shaqo fiican ka nadiifi nadaafadda, rabto inaad shaqo fiican ka qabato dayactirka qalabka silsiladda, markaa waa inay shaqo fiican ka qabataa nadaafadda. Tani waa arrin aad muhiim u ah, silsiladda korantada ee habka isticmaalka muddada-dheer waxay soo saari doontaa boodh iyo wasakh badan, haddii aan waqtiga lagu nadiifinin, waxay ...